Hiawatha Academies | Dalada iskuulada Hiawatha Academies waa hoygi badbaadada
Aragtida hufan ee Iskuulada Hiawatha waa in la sharfo bini’aadanimada dadka oo dhan, waxaan si cad u horjoogsanaa cadaalad daradda ku salaysan hab qorsheysan, oo maamulan, inaga oo raadinayna in adduunka oo dhami ay ka hirgasho hufnaan dhamaystiran.
Iskuulada waxbarashada ee Hiawatha, waxaa ka go’an guusha ardayda oo dhan, iyada oo aan loo eegayn meeqaankooda muhaajirnimo (qaxootinimo), sinjigooda, diintooda, xaaladooda jinsi, middooda dhaqaale iyo waliba waxyaabaha ay rumaysan-yihiin.
Iskuulada waxbarasho ee Hiawatha: waxaan qiimeynaa kala duwanaanshaha muuqaalka ardayda iyo bulshooyinka ku hareeraysan.
Iskuulada waxbarasho ee Hiawatha: Qiyamnkeena asaasiga ah, waxa uu qeexayaa in caruurtu ay muhiim u yihiin howlaha aan qabano oo dil ,waxaan qaadnaa talaabooyin cad-cad, waxaan ka duul-naa wanaag-ga si aan u horumarno, si wada-jir ah-na waxaa nahay kuwa xoogan.
Iskuulada waxbarasho ee Hiawatha: Baaqa madaxbanaanida ee dowladda Maraykanka waxa uuu ictiraaf-sanyahay xaquuqda qof-kasta oo ah in uu noolaado, shaqo helo, xoriyad helo iyo waliba in uu farxad ku joogo.
Iskuulada waxbarasho ee Hiawatha: Dowladda Maraykanka waxaa dhisay qowmiyado kala duwan, qaarkoodna ay yihiin kuwa wadanka u dhashay, halka qaarka kalena ay yihiin soo galooti ama muhaajiriin.
Iskuulada waxbarasho ee Hiawatha: Xeerka laanta socdaalka ee loo soo gaabiyo (ICE) oo la meel-mariyay sanadkii 2011-ka waxa uu qeexayaa in laanta socdaalka iyo kastamyada aysan howl-gallo ka samayn karin goobaha xasaasiga ah sida goobaha waxbarashada oo ay ku jiraan iskuulada, iyaga oo aan wax ogolaansha ah ka haysan mid ka mid laamaaha sharciga ee Federaalka, marka laga reebo in ay jirto xaalad lagama gudbaan ah.
Iskuulada waxbarasho ee Hiawatha: Aragtideena fog waxa ay tilmaamaysa in aan ka hortagano sinaan la’aanta waxbarasho, inaga oo hubinayna in ilmo kasta uu helo iskuul tayo leh oo uu wax ka barto.
Iskuulada waxbarasho ee Hiawatha: waxaa lagu tix-galiyaa in ay buuxiyeen fursado ka jiray dhanka waaxda waxbarashada ee Minnesota, iyaga oo loo aqoonsaday mid kamid ah goobaha waxbarasho ee ugu heer-sareeyay sanadihii la soo dhaafay.
Iskuulada waxbarasho ee Hiawatha: Minnesota waxa taariikh ahaan lagu yaqaan in ay soo dhaweyso qaxootiga iyo muhaajirinta ama soo galootiga, iyaga oo loo arkayo in ay qiimo muhiim ah ugu fadhiyaan bulshada.
Iskuulada waxbarasho ee Hiawatha: waxaa ka go’an in dhamaan ardayda qaybahooda kala duwan laga taageero dhanka horumarka, iyada oo si gaar ah loo beegsanayo kuwooda ay heleeshay fursad yarida ka jirta Koonfurta Minneapolis, si ay u dhex-galaan una fahmaan bulshooyinka kala duwan ee ay la nool-yihiin.
Iskuulada waxbarasho ee Hiawatha: Caruurta joogta waqti xaadirkan ayaa ku koray caalam ay si joogta ah ula kulmaan luuqado iyo dhaqamo kala duwan, si loo diyaariyo aqoon-yahyano ka dhisan dhanka shaqada iyo noloshada qarnigan 21-aad, waxaan u baahan-nahay in aan bixino waxbarasho tayo gaar ah leh, taasi oo caruurta u suurta-galinaysa in ay helaan khibrad iyo waaya aragnimo ay dadka kale ku fahmaan.
Iskuulada waxbarasho ee Hiawatha: Xarumaha waxbarasho ee Hiawatha Academies waxa ardayda ay u adeegto ay yihiin kuwa 98% kala duwan dhinaca jinsiyad-da halka 90% ay heli karaan adeegyada iskuulka oo ay ku jirto cuntada oo si bilaash ah, waxaan 89% ay ku hadlaan luuqad aan ahayn English-ka.
Iskuulada waxbarasho ee Hiawatha: Doorashadii Qaran ee Maraykanka ayaa dhalisay in boqolaal kamid ah qoysaska ilmahoodu ay dhigtaan goobaha waxbarasho ee Haiawatha ay la soo diristo cabsi iyo murugo la xiriirta bad-baadada ardayda, iyada oo taasina ay sabab u tahay hadalo nacayb kicinaya oo la is-weydaarsday xilligi doorashada ee sanadkii hore ‘2016.
Iskuulada waxbarasho ee Hiawatha: Qoysaska iyo dhalinyarada ku xiran dallada ‘waxbarasho ee Haiwatha ayaa khatar ku jira, waxaana qaarkood ay xilli horeba ay la kulmeen ficilo iyo hadalo nacayb ah oo ku aadan halka ay ka soo jeedaan, diintooda, jinsiyaddooda, tan iyo markii ay doorashadu qabsoontay.
Si arintan waxaa looga qabto guddiga sare iyo hogaanka dallada waxa ay taageereen in la sameeyo dallad kale oo loogu magac-daray Iskuulada aaminka ah oo qaban doona shaqooyin dhowr ah oo kala ah.
In la dhiira-galiyo dulqaadka iyo raali ahaanshaha si looga hortago hadalada nacaybka ku salaysanIn la dhiira-galiyo dulqaadka iyo raali ahaanshaha si looga hortago hadalada nacaybka ku salaysan.
Mas’uul kasta oo ka tirsan shaqaalaha, qandaraasleyda, mutadawaciinta iskuulka iyo wakiilada iskuulka waa in ay weyddiiyaan qof kasta oo ka socda ICE ee doonaya in uu gudaha u soo galo xarumaha waxbarashada,waa in marka hore uu soo wargaliyo agaasimaha guud ee goobta, waxaana taasi ay suurtagalinaysaa in mas’uulkaas uu la yimaado waraaq sax ah oo cadayn u ah dalabkiisa la xiriira in uu gudaha u soo gali karo goobta.
Iskuulada waxbarasho ee Hiawatha: Xeerka xaquuqulka Insaanka Minnesota farqadiisa 363A, waxaa uu si dheeli tiran u tilmaamayaa in dhaqamada la xiriira cadaalad-da darada, bahdilid-da iyo yasidda qofka ay yihiin kuwa ka hor-imaanaya sharciga. Waxaa sharciga uu si cad u mamnuucay in qof lagu cunsuriyeeyo shaqada, guryaha dadweynaha, adeeg-ga guud ee bulshada, waxbarashda, ganacsiyada si gaar ahn-na dhinaca waxbarashada, midabka, jinsiyad-da, diinta, da’da xaalad-da guur iyo waliba curyaanimada.
Iskuulada waxbarasho ee Hiawatha: magaalada Minneapolis wax ay ku dhawaaqday in ay sii ahaan doonto magaalo lagu bad-baado, iyada oo la tixraacayo xeerka magaalada sadarkiisa 2-aad cutubka ee 19-aad.
Lama ogola in la adeegsado ama dibadda loo saaro xogta ardayga dhigta Iskuulada Haiwatha marka laga reebo inta uu sharciga ogolyahay mooyee.
Waxaa la qorsheeyay in goobaha waxbarasho ee Haiwaha qaybahooda kala duwan oo ay ku jiraan dhismaayshiisa, adeegyadiisa iyo waliba agabyadisa ay badbaado u noqdaan ardayda, qoysaska iyo waliba bulshada.
Qorshaynta taageero dhamaystiran oo muhiim u ah horumarinta cadaalad-da iyo mabaadi’ada bulshooyinka kala dhaqanka ah.
Marti-galinta kulamo bulshada lagu kabayo si loo helo goobo ay ku dabaaldagaan ,isla markaana ay isku dhaafsan xogaha la xiriiira xuquuqdooda asaasiga ah.
Bixinta fursado horumarineed oo kor-loogu qaadayo shaqaalaha qaybahooda kala duwan si loo hubiyo hufnaantooda.
Taageerid-da shaqooyinka iskuulka oo ah kuwa la xaqiijiyay.
Horumarinta iyo hirgalinta qorshe midaysan, iyada oo lagala tashanayo dadka ay khusayso si loo buuxiyo baahiyaha ku cad qaraarkan, isla markaana dib loo war-galiyo guddiga fulinta ee iskuulka.
Iskuulada waxbarasho ee Hiawatha: waxa ay si dhow ula shaqaysaa maamulka magaalada iyo waaxyaha dowladaha hoose ee degmada, hay’adaha iyo waliba bulshada si loo hubiyo in ardayda iyo qoysaskooda ay helayaan goob ammaan ah oo la ilaaliyay.
Guddiga fulinta iskuulada Hiawatha iyo madaxda goobaha waxbarashada waxa ay isku-waafaqeen in la ilaaliyo xogta ardayda iyo qoysaskooda iyo sidoo kale shaqaalaha iskuulka, kuwaasi oo ay saamayn karaan siyaasadaha mustaqbalka ee dalka.
Waxaa kaloo bahda waxbarashada ‘Iskuulada Haiwatha si cad uga go’an in la siiyo ardayda, macalimiinta iyo qoysaska ku xiran dalladan goob waxbarasho oo la hubiyay amaankeeda si meesha looga saaro in la hayb sooco, isla markaana laga dheeraado wixii handaad ah oo ay kala kulmi karaan laamaha socdaalka, iyada oo ujeedku uu yahay in ay helaan sharciyada ay dowlad-du bixiso.